Soo-saaraha Shiinaha iyo Soo-saare L-Alanine | Haitiyaan
Wax soo saarka: L-Alanine
CAS Maya.: 56-41-7
Heerka: USP, AJI, CP, GB
Waxqabadka iyo dalabka: cuntada lagu daro, nafaqada nafaqada, Waxyaabaha ay ka kooban tahay dawooyinka, iwm
Caddaan cad ama ku dhowaad cad ama budada kareemka
Shaqada iyo codsiga:
L-Alanine waxay hagaajin kartaa qiimaha nafaqada ee cunnooyinka, cuntooyinka iyo cabbitaannada kala duwan, sida: rootiga, keegga barafka leh, shaaha miraha, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, cabbitaannada kaarboonka leh, sorbets, iwm. Ku darista 0.1 ~ 1% ee alanine waxay si weyn u horumarin kartaa ka-faa'iidaysiga borotiinka. cunnooyinka iyo cabitaannada, maxaa yeelay alanine waxay leedahay astaamo si toos ah loogu nuugo unugyada, waxay si dhakhso leh uga soo kaban kartaa daalka oo ay u raaxeysan kartaa ruuxa ka dib cabitaanka.
Hagaajinta dhadhanka macmacaanka macmalka ah, kordhi macaanka oo yaree qiyaasta. Ku darista 1 ~ 10% alanine ee macmacaanka isku dhafka ah waxay kordhin kartaa macaanka waxayna jilcin kartaa macaanka sida macaaneyaasha dabiiciga ah, waxayna wanaajineysaa dhadhanka.
Alanine sidoo kale waa mid kamid ah walxaha ceyriinka ee isku dhafka macaanka sare ee Alitame (L-aspartyl-D-alanine, 600 jeer macaanka sucrose).
Waxaa loo adeegsaday sidii xoojiye dhadhan. Waxay kordhin kartaa saameynta xawaashyeed ee xawaashka; sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa inuu noqdo hagaajiye jilicsan si loo hagaajiyo dhadhanka asiidhka dabiiciga ah.
L-alanine waa shey cayriin muhiim u ah soo saarista VB6.
"Amino Acid Injection-800 ″ oo leh L-alanine oo ah maaddada ugu weyn ee lagu daweeyo beerka iyo cudurka maskaxda iyo wuxuu ku booriyaa bukaannada qaba miyir beelka 'hepatic coma' inay dhaqso u soo kacaan. Sidoo kale waa dawada duraysa.
Hore: L-Cysteine ​​hydrochloride monohydrate